ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးထိပ်တန်းအလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Alabama အဘိဓါန်လေကြောင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 888-247-5176 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အခမဲ့စျေးနှုန်းကိုးကားများအတွက်. သငျသညျစီးပှားရေးအတှကျအဘိဓါန် Alabama ဧရိယာ မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုရှာကြ၏, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျ Alabama တှငျပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျအဘိဓါန် Alabama ဧရိယာ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီချက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏အချည်းနှီးသောပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
Alabama တှငျ chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထွက် Check.
သငျသညျအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်အနီးဆုံးလေဆိပ် & ဘာမင်ဂမ်ထဲက, Montgomery, မိုဘိုင်း, Huntsville, Alabama အဘိဓါန်ဇိမ်ခံကားစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အသေးကနေအားလုံးဂျက်အမျိုးအစားများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်, အလယ်အလတ်, ကြီးမားသောပင်ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ် . ကိုးကားထံမှမည်သည့်အာကာသလေယာဉ်လေကြောင်းလိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ, Hawker, လီယာ, သိမ်းငှက်, အန်တုသူ, Gulfstream, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကို, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးအတွက်ဘိုးအင်းစီးပွားရေးဂျက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်. ကျနော်တို့နာရီအနည်းငယ်နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်. မှာသင်၏နောက်ဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်မှအကောင့်အမှုဆောင်အရာရှိကိုခေါ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ 888-247-5176.
ကျောက်ဖြူခွက်ကို, AL ဒေါသန်, AL Huntsville, AL Phenix စီးတီး, AL
Auburn, AL စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, AL Madison, AL Prattville, AL
Bessemer, AL ဖလော, AL မိုဘိုင်း, AL Prichard, AL
ဘာမင်ဂမ်, AL Gadsden, AL Montgomery, AL Tuscaloosa, AL
ဘာမင်ဂမ် W က W က KBHM ဘာမင်ဂမ်-Shuttlesworth အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် P-S က 1,325,897
ဒေါသန် DHN DHN kd ःဎ ဒေါသန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 46,792
Huntsville HSV HSV KHSV Huntsville အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (သူ Carl T က. ဂျုံးစ်ဖျော်ဖြေမှု) P-S က 519,785
မိုဘိုင်း MOB MOB KMOB မိုဘိုင်းဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 278,053
Montgomery MGM MGM KMGM Montgomery ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Dannelly ဖျော်ဖြေမှု) P-N ကို 175,619
Bessemer EKY Keke Bessemer လေဆိပ် R ကို 0
Pell စီးတီး PLR PLR KPLR စိန့်. Clair ကောင်တီလေဆိပ် R ကို 0
Abbeville 0J0 Abbeville စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ကျောက်ဖြူခွက်ကို စား လာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ် Shelby ကောင်တီလေဆိပ် GA 0
Albertville 8A0 Albertville ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (သောမတ်စ်ဂျေ. Brumlik ဖျော်ဖြေမှု) GA 2
အလက်ဇန်းဒါးစီးတီး ALX ALX KALX သောမတ်စ်ကို C. စယ်ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Aliceville AIV AIV KAV ဂျော့ခ်ျ Downer လေဆိပ် GA 0
Andalusia / ထ 79J ကို တောင်ပိုင်း Alabama အဘိဓါန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (ဘီလ် Benton ဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Anniston ANB ANB KANB Anniston ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Anniston မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်) GA 1,598
Ashland / Lineville 26တစ်ဦး Ashland / Lineville လေဆိပ် GA 0
Atmore 0R1 Atmore စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Auburn AUO AUO ရိုဝီက Auburn University မှဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Auburn-Opelika ရောဘတ်, G ခဲ့သည်. Pitt) GA 360
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Minette 1R8 ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Minette စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Brewton 12J ကို Brewton စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ဘဏ္ဍာစိုး 09တစ်ဦး ဘတ္ -Choctaw အဘိဓါန်ကောင်တီလေဆိပ် GA 0
ကန်ဒန်း 61တစ်ဦး ကန်ဒန်းစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
စင်တာ ပိုက် KPYP မြစင်တာ-Piedmont ခြာရိုကီကောင်တီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 0
Centerville 0A8 Bibb ကောင်တီလေဆိပ် GA 0
Clanton 02တစ်ဦး Chilton ကောင်တီလေဆိပ် (Gragg-Wade ကွင်းဆင်းခဲ့သည်) GA 0
Clayton 11တစ်ဦး Clayton စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Courtland 9A4 Courtland လေဆိပ် (လောရင့်ကောင်တီလေဆိပ်ခဲ့သည်) GA 0
Cullman CMD KCMD Cullman ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Folsom ဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Dauphin ကျွန်း 4R9 ယေရမိကဒဲလေဆိပ် (Dauphin ကျွန်းလေဆိပ်ခဲ့သည်) GA 0
Decatur DCU DCU KDCU Pryor ကွင်းဆင်းဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 0
Demopolis DYA KDYA Demopolis ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Demopolis စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA 0
Elba 14J ကို သူ Carl Folsom လေဆိပ် GA 0
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း EDN ETS သို့ KEDN လုပ်ငန်းစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Eufaula EUF EUF KEUF Weedon ဖျော်ဖြေမှု GA 0
အမြဲစိမ်း GZH KGZH Middleton ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Fairhope CQF KCQF H ကို. L ကို. ဆန်နီ Callahan လေဆိပ် GA 3
Fayette M95 ရစ်ချတ်အာသာဖျော်ဖြေမှု GA 0
Florala 0J4 Florala စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Foley 5R4 Foley စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ဝိန်း Fort Payne 4A9 Isbell ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Gadsden ထွေအုပ် ထွေအုပ် kgad အရှေ့မြောက် Alabama အဘိဓါန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Gadsden စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA 0
ဂျီနီဗာ 33J ကို ဂျီနီဗာစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ဂရင်း 7A0 ဂရင်းစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ဂရင်းဗိုင်း PRN KPRN Mac အတွက် Crenshaw သတိရအောက်မေ့လေဆိပ် GA 0
အာရှရပင်ဟေးလ် 3A0 အာရှရပင် Hill ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ် GA 0
ပင်လယ်ကွေ့ကမ်း JKA အပြန်အလှန်ဖြစ်သော KJKA ဂျက် Edwards ကလေဆိပ် GA 55
Guntersville 8A1 Guntersville စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ဂျိုး Starnes ဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Haleyville 1M4 Posey ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Hamilton က Hab Hab မသန်စွမ်း မာရီယန်ကောင်တီ - Rankin Fite လေဆိပ် GA 0
Hartselle 5M0 Hartselle-မော်ဂန်ကောင်တီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Rountree ကွင်းဆင်းခဲ့သည်) GA 0
Headland 0J6 Headland စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Huntsville MDQ KMDQ Madison ကောင်တီအလုပ်အမှုဆောင်လေဆိပ် (တွမ် Sharp က Jr. လယ်ယာ) GA 26
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် 4R3 Jackson ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ် GA 0
နဂါး JFX KJFX Walker ကကောင်တီလေဆိပ် (Bevill ဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Lanett 7A3 Lanett စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
မာရီယန် A08 Vaiden ဖျော်ဖြေမှု GA 30
မိုဘိုင်း BFM BFM KBFM မိုဘိုင်း Downtown လေဆိပ် (Brookley Aeroplex ခဲ့သည်) GA 2,410
Monroeville MVC MVC KMVC မွန်ရိုးကောင်တီလေဆိပ် GA 0
ကြွက်သား Shoal MSL MSL KMSL အနောက်မြောက် Alabama အဘိဓါန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 802
Oneonta 20တစ်ဦး Robbins ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Ozark 71J ကို ဘလက်ဝဲလ်ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Prattville 1A9 Prattville-Grouby ဖျော်ဖြေမှု (Prattville လေဆိပ်) GA 17
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး 3M8 မြောက်အမေရိက Pickens လေဆိပ် GA 0
ရော့ 7A5 ရော့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Russellville M22 ဘီလ် Pugh ဖျော်ဖြေမှု (Russellville စည်ပင်သာယာလေဆိပ်ခဲ့သည်) GA 0
Scottsboro 4A6 Scottsboro စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (သမ်မာကမျြးဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Selma SEM SEM Kshen Craig ဖျော်ဖြေမှု GA 2
စိန့်. Elmo 2R5 စိန့်. Elmo လေဆိပ် GA 0
Sylacauga SCD KSCD Sylacauga စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (မာကယ်ဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Talladega ASN ASN KASN Talladega စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 5
Troy TOI TOI KTOI Troy စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (N ကို. ကက်နက်ကမ့်ဘဲလ်ဖျော်ဖြေမှု) GA 0
Tuscaloosa TCL TCL KTCL Tuscaloosa ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 1,706
Tuskegee 06တစ်ဦး Moton ကွင်းဆင်းစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ပြည်ထောင်စု Springs 07တစ်ဦး Franklin ဟာဖျော်ဖြေမှု GA 20
Wetumpka 08တစ်ဦး Wetumpka စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
Addison 2A8 Addison စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Ardmore 1M3 Ardmore လေဆိပ်
Bayou, La Batre 5R7 ရွိုင်း E ကို. ray လေဆိပ်
Ctom 5R1 ရွိုင်း Wilcox လေဆိပ်
Creole အဘိဓါန် 15တစ်ဦး မာကု Reynolds က / မြောက်မိုဘိုင်းကောင်တီလေဆိပ်
နှစ်ချက် Springs 3M2 နှစ်ချက် Springs-Winston County မှာလေဆိပ်
Eutaw 3A7 Eutaw စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (အသတ်မရှိပိတ်ထား)
Fairhope 5AL ငါးမြစ်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
ဝိန်း Fort Deposit 67တစ်ဦး ဝိန်း Fort Deposit-Lowndes ကောင်တီလေဆိပ်
Hazel အစိမ်းရောင် M38 Hazel အစိမ်းရောင်လေဆိပ်
Huntsville 3M5 Moontown လေဆိပ်
Luverne 04တစ်ဦး ဖရန့် Sikes လေဆိပ်
ထင်းရှူးတောင်တန်း 71တစ်ဦး ထင်းရှူးတောင်တန်းစည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ရှံဆုန် 1A4 Logan ဖျော်ဖြေမှု (ရှံဆုန်သည်စည်ပင်သာယာလေဆိပ်)
Stevenson 7A6 Stevenson မှလေဆိပ်
ဖွစျတဲ့စတော့ချ HL2 Hubbard ကမ်းတက်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
Tallassee 41တစ်ဦး ရိဗ်လေဆိပ်
Vernon M55 Lamar ကောင်တီလေဆိပ်
ရက်ကန်း 25တစ်ဦး McMinn လေဆိပ်
အခြားအစိုးရ / စစ်တပ်လေဆိပ်
Foley KNHL NOLF Wolf က2
Huntsville Hua Hua Khua Redstone တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း (Redstone အာဆင်နယ်)
Montgomery MXF MXF KMXF Maxwell လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း 293
Ozark OZR OZR KOZR ကဲရ်တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း (ဝိန်း Fort Rucker)
Ozark Hey Hey KHEY Hanchey ကြည်းတပ်ရဟတ်ယာဥ်ကွင်း (ဝိန်း Fort Rucker)
Ozark သူတို့ရဲ့ သူတို့ရဲ့ ကလိုရင်း Lowe ကြည်းတပ်ရဟတ်ယာဥ်ကွင်း (ဝိန်း Fort Rucker)
Gardendale AL18 က Parker ဖျော်ဖြေမှု
Hurtsboro AL05 Sehoy လေဆိပ်
Tuskegee 27AL Little ကတက္ကဆက်ပြည်နယ်လေဆိပ် 464
Tuskegee AL73 TGE ရှပ်ဖျော်ဖြေမှု (Tuskegee တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း)
Brundidge 60တစ်ဦး Brundidge စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း) 
စင်တာ C22 Center ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း)
Goodwater 69တစ်ဦး Coosa ကောင်တီလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 1997-2002) 
Linden 70တစ်ဦး Freddie ဂျုံးစ်ဖျော်ဖြေမှု (ပိတ်သိမ်း)
မိုဘိုင်း S26 Skywest Airpark (ပိတ်သိမ်း) 
Moundville L44 Moundville လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း) 
Selma S63 Skyharbor လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း) 
York မြို့ 23တစ်ဦး Mallard လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2001?) 
ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်စင်းလုံးငှားမစ္စစ္စပီ | ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်ဘာမင်ဂမ်